ihe nkiri na-ekpuchi ọkụ eletrik Polyimide Film China Manufacturer
Nkọwa:Ihe na-ekpo ọkụ na masking,Ịkpọ ihe nkiri Polyimide maka ihe nkpuchi,Egwuregwu Egwuregwu Masking
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Nlekọta Ihe Ịgba Ahụike Ahụike Maka ihe nkpuchi > ihe nkiri na-ekpuchi ọkụ eletrik Polyimide Film
1.Mgbe ọhụụ nke anya anya.
2.Factory price na mma mma.
3.Ọ bụrụ na ị na-azụ ndị ahịa, dị na imewe na ngwugwu.
4.Na-enye OEM sevice.
5.Ofe ọrụ na nnyefe oge.
6. Ihe atụ dị iche iche.
1. Ịnweta steam dị jụụ na gburugburu 40 Celsius Celsius, nke ga-eweta mmetụta dị jụụ na tepidity na ooh na anya na akpụkpọ.
2.Ime ka ike gwụrụ na esemokwu, na-akwado mgbasa ọbara, na-ewepụ ihe anya.
3. Steam steam nwere ike ịbụ nkeji iri na ise ikpeazụ, mee ka ike gwụ gị, mee ka anya mmiri dị elu, ma mee ka akpụkpọ anụ dị ọcha.
4.Etu iji ebu. Ị nwere ike iji oge ọ bụla, mgbe ị na-ehi ụra, oge ntụrụndụ, ehihie ụtụtụ, na-ejegharị n'ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọ oloko, oge ezumike na ọrụ, wdg.
Nguzogide mbụ: 35.5-41.7Ω, Center nke iguzogide 38.4Ω
Ihe na-ekpo ọkụ na masking Ịkpọ ihe nkiri Polyimide maka ihe nkpuchi Egwuregwu Egwuregwu Masking Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na Masking Ihe na-ekpo ọkụ maka Ntanye Ihe na-ekpo ọkụ maka Tile Nkume na-ekpo ọkụ na Cat Mmiri na-ekpo ọkụ na snow